Dhakhtar lagu eedeeyay in uu sumeeyay bukaanno - BBC News Somali
Image caption Frédéric Péchier ayaa lagu eedeeyay in uu sumeeyay bukaanno garaayo 17
Dakhtar u dhashay dalka Faransiiska ayaa loo heystaa dambi ah inuu sumeeyay 17 qof oo bukaan ahaa, waxaa socdaa baaritaannada lagu hayo ninkan la sheegay in uu sumeeyay bukaanadaas.
Frédéric Péchier waxaa uu beeniyay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay balse waxaa uu wajahi karaa xabsi daa'in waa haddii lagu caddeeyo inuu bukaanada sumeeyay.
Bukaanno "nasasho u baahan badalkii dawo looga qori lahaa"
Maxay tahay sababta loo xiray xarun caafimaad oo Muqdisho ku taalla?
Garsoore ku sugan magaalada Besançon ee dalka Faransiiska ayaa baarayay dhakhtarka sannadkii 2017-kii , xilli loo heystay 7 bukaan ah oo la sheegay in uu sumeeyay ninkan, markii dambe waxaa lagala noqday rukhasaddii uu ku shaqeynayay dhakhtarka.
Booliska ayaa toddobaadkan su'aalo ka weyddiyay dhakhtarka 66 kiis oo la xiriira dambiyada loo heysta, waxaana kamid bukaanno u dheexeya 4 jir ilaa 80 jir ah oo kamid ah dadka uu waxyeellada u geystay.
Dacwad ooge lagu magacaabo Etienne Manteaux ayaa warbaahinta u sheegay in Frédéric Péchier marar badan lagu arkay qolka lagu sameeyo howlaha qalliinka bukaanka isla markaasna bukaanada uu ku sameeyay baaritaano degdeg ah.
Qareenkiisa waxay shegeen in booliska ay si khaldan u fasireen hadallo uu sheegay xilliggii ugu horreysay ee su'aalaha la weyddinayay dhakhtarka.
"Wax kasta oo kasoo baxa baaritaanada waxay khatar ku yihiin xirfaddeyda" ayuu dhakhtarka u sheegay warbaahinta xilli uu shir jar'aaid ku qabanayay Faransiiska.
Waxaa uu sheegay in arrintani ay saameyn ku reebtay qoyskiisa iyo carruurtiisa.
"laguma kalsoonaan karo dhakhtar lagu tilmaamay inuu dadka sumeeyo" ayuu yiri dhakhtarka.